Oslo:-Waxaa laga ogeysiinayaa akhristayaasha Halgan.net in maanta uu ka bilaabi doono Sh. Maxamed Cumar Dirir kitaab la yiraahdo Fadlul Islam Masjidka Al-tawfiiq Sheekh Maxamed Cumar Dirir ayaa socdaal dacwadeed ku jooga magaalada Oslo ee xarunta dalka Norway waxaana uu ka mid yahay culumada lagu marti qaaday in ay ka soo qeyb galaan Mutamarka 10aad ee Oslo.
Sheekh Maxamed Cumar Dirir ayaa waxaa uu ka mid yahay culumada waaweyn ee dacwada ka wada magaalada Hargeysa ee xarunta Maamulka S/land. Kitaabka ayaa waxaa uu bilaaban doonaa inshalaah 17:10 waxaana si live ah aad uga daawan doontaaInshalaah Halgan Web Tv Station.
Halkan Ka Daawo HalganWeb Tv Station.
2 comments on “Sheekh Maxamed Cumar Dirir oo kitaab ka bilaabaya Masjidka Al-tawfiiq ee Oslo”
ABU TURAB al-HIRAANI on April 6, 2012 at 6:16 am said:
asc dhaman mamulka halgan.net iyo dhaman inta ku xeran webkan inta kadib waxan codsaneyna hadiin webka duruusta ku jirto mp3 laga dhigo melna nagu habesan yacni qeyb duruus ah usameya kitabkasto na goni u hagajiya mida kale waxan codsana sida walalka hishaam bin hishaam u codsaday kitab TADRIBU RAWI SH DR CALI M SALAX AQRIYAY
HISHAAM BIN HISHAAM on April 5, 2012 at 3:10 pm said:
asc masha alaah alaah dhoro sh maxamed cumar dirir waa calim rabani ah naxsibuhu walahu xasibuh wala nuzaki calalahi axad waa sheiklh an aad u jeclahay ilaah ha dhore mida kale waxan idinka codsana kitaabki oo aqriyay sh dr cali maxamed salax ee tadribu-raawi-